"Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay qarsoodi": Pierre Casiraghi wuxuu ka cabanayaa amiiro "miskiin ah" William iyo Harry - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE "Qof walba xaq buu u leeyahay qarsoodi": Pierre Casiraghi wuxuu ka cabanayaa amiiro "miskiin ah" William iyo Harry
Ma doonayo in sidaas la wada hadlo. Waxay ka fogaatay indhaha indhaha, Pierre Casiraghi looma isticmaalo si uu u arko noloshiisa gaarka ah ee la baadho, kii ka soo muuqda dadweynaha oo kaliya dhacdooyin rasmi ah oo ku saabsan Dhagaxa : Bal de la Rose, xafladaha xafladaha, xafladaha boqortooyada ... ee ku xiga, ninkeeda Beatrice Borromeo abuuraa fikrado. Xaalad u muuqata in ay ku haboon tahay isaga, oo isagu jecel inuu ilaaliyo qarsoodi. "Waxaan fahamsanahay in dadku ay xiiseyn karaan qoyskeyga, laakiin ma faragalin karaan asturnaantasharxi Pierre Casiraghi à Boat International. Saaxiibtinimadayda iyo midda goobtayda u dhow waa ay inoo eegtaa, waa inaan ixtiraamnaa ".
Noloshiisa, wiilka Caroline ee Monaco Sidaa darteed waxay dooneysaa in ay si gaar ah u ilaaliso. Tani waxay ka dhigaysaa mid aan ku haboonayn xaalada labada amiir ee kale ee caanka ah: William et Harry. "Dadka saboolka ah! Dabcan, xaaladaheena lama barbar dhigi karo: Ingiriiska waa wadan aad u weyn halka Monaco ay aad u yar tahay dhaqamada kala duwan. Laakiin dhammaantiis, qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay qarsoodi "waran Pierre Casiraghi.
Ereyada in isaga iyo xaaskiisa codsiga warqadda, sidaas in March 2018, Beatrice Borromeo lahaa kacdoonada ka dhanka ah wararka been abuur ah kuwaas oo ku wareegay wargeyska Talyaaniga. On account on Twitter, hooyada dhalinyarada ee 33 sano ayaa riixay kaftan: "Laakiin goormee ayuu Corriere joojinayaa inuu aqbalo wararka been abuurka ah ee ka yimid #Chi sida ilaha?"waxay daabacday.
Prince Albert II oo Monaco ah iyo Pierre Casiraghi abaalmarin abaalmarin ah oo lagu qaaday tartanka Buhurt Prime
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/chacun-a-droit-a-son-intimite-pierre-casiraghi-plaint-les-pauvres-princes-willia-953996